idolobha Ural Chelyabinsk kuwufanele ukuvakashelwa wonke umuntu. Waziwa ngokuthi esikhulu yezimboni Russia ezaziwayo, ngesikhathi esifanayo futhi isikhungo kwamasiko. Kuleli qophelo, kukhona: Regional kwebuciko, History Museum, Museum of Applied Ubuciko.
Umuzi Ubuye zoo, isekisi, Hippodrome 10 ihhashi amakilabhu. Ngo Chelyabinsk, elise 2 ekhonsathini nawemidlalo yaseshashalazini 6, lapho uzothola unombono ukunambitheka yakho. Kulomuzi njalo ngonyaka, Imbali Festival ligcinwe, kanye amakhonsathi eziningi, yamathanga, mass ezemidlalo imidlalo. Zonke epaki 8 iholide ungakhululeka bese nijabula. Kufanele futhi uvakashele izindawo isiko wesimanje. Ungaqonda kalula ukuthi lapha ngesitimela noma indiza.
Kulesi sihloko sizohlola sohlelo amahhotela e Chelyabinsk.
Ihhotela "Arbat" - kuyihhotela maphakathi Chelyabinsk, labavulekela ngo 2014. Budebuduze kukhona ezikhangayo esemqoka, Revolution Square, izitolo, izindawo zamabhizinisi, zokudla nezindawo zokudla.
Izinhlobo izikhungo Isikhwama kuhlanganisa 77 amakamelo ukhululekile lwezigaba eziningana. Zonke amakamelo abe yokugezela yangasese, ifenisha ukhululekile, i-TV nezinye izinto ezenzelwe. It inikeza izivakashi enikeziwe yokudlela ethokomele, esebenza ukunambitheka ngamunye. Okunye izindawo zibandakanya internet mahhala.
Amahhotela Uma ucabangela Chelyabinsk, gqamisa "Vidgof". Lokhu ukusungulwa Itholakala enkabeni yedolobha. It yakhelwe ku isitayela eliyingqayizivele futhi ine 139 amakamelo isigaba "Lux". Bonke babe isitayela yesimanje futhi eyinkimbinkimbi. Amakamelo ukunikela elinemishwe hypoallergenic, ifenisha ukhululekile, ephephile, internet, mini-bar nokuningi. Intengo yokuhlala kuhlanganisa ibhulakufesi futhi ukuvakashela ukuqina isikhungo yesimanje.
Leli hhotela ekahle kakhulu yokuba abantu ibhizinisi. Amakamelo izici ehhotela umhlangano, zinakho konke okudingekile umsebenzi elithelayo. Ngemva kosuku olunzima ungakwazi zizokudla ozakwabo at yokudlela "Dome". Ngaphezu ihhotela inikeza izivakashi: sauna, eziningi ezimbili zokupaka, ejimini, indawo yokubhukuda, zokungena internet.
Indawo yokudlela "Vizit" itholakala inhliziyo Chelyabinsk, kuhlanganise nokuphila yayo kwezombangazwe namasiko, abangalayisenswa ngiziqhayise amahhotela ababaningi waseChelyabinsk. Isakhiwo kohulumeni basekhaya kanye neziphathimandla zikahulumeni, kwakhiwe uhulumeni zesifunda, ekuphathweni lesifunda kanye edolobheni, Chelyabinsk idrama zezemfundo yaseshashalazini, intsha eningi, ezihlukahlukene cinema yesimanje - konke etholakala eduze ngokushesha, ngakho-ke, ngaphambi kokuba noma yimiphi kuleyo mithi engafinyelelwa e Ngemizuzwana.
Guesthouse Holiday inikeza yokuhlala kumagumbi sisekhaya anemisila nezinto ezidingekayo futhi ifenisha.
Ukuhlola Chelyabinsk amahhotela (5 izinkanyezi), kuyafaneleka kokukhuluma ehhotela "Victoria". Kuyinto ehhotela ibhizinisi, lapho kwakubenza bazizwe benethezekile kulekelelwa eliphezulu kakhulu service. Insiza a Ukuthokomala, indawo yokuhlala ntofontofo. Kuyaphawuleka ukuthi i-kuzivakashi ayeke lapha eside, zikhona amakamelo nge emakhishini. Zonke amakamelo zonke Izinsiza ezidingekayo ukuze ukuphumula ukhululekile futhi umsebenzi wokudala. Basuke ifakwe Izinsiza, izakhiwo zesimanje, khulula inthanethi wireless kanye minibar.
Ukuze izivakashi inikezwe ukufinyelela kwamahhala sauna, pool, ejimini futhi Jacuzzi. Yokudlela isebenza nesikhungo? - indawo ephelele sokudla romantic, imihlangano ibhizinisi, imindeni ihlangane ndawonye futhi amaqembu enobungane. Lenkomfa amahholo ne ezidingekayo imishini yezobuchwepheshe - kuba platform ekahle nemicimbi ehleliwe ezihlukahlukene, kuhlanganise nemihlangano ibhizinisi, izingqungquthela, trainings, izethulo kanye nezingxoxo.
Indawo enkulu ukuze uphumule kahle, ngeke Wellness-isikhungo, noma yaba massage esizeni. Kubantu asetshenziswa ngubani njalo ngihlale ngiwumqemane, kukhona ejimini. Ngesikhathi izivakashi ehhotela nethuba ukudlala amabhiliyade. yenani lamakamelo kwakho kufaka kwasekuseni okumnandi.
Siyaqhubeka ukubuka emahhotela aphambili e Chelyabinsk. Ihhotela "Markshtadt" - yindawo yesimanje, isenkabeni yedolobha. Kutholwe phakathi emgwaqweni. Kirov futhi epaki "Aloe ensimini", ihhotela linikeza izivakashi zayo 92 ukhululekile, amakamelo ethokomele, amagumbi omhlangano 2, okuyinto yokuhlala abantu 100, nokungu-50? futhi zonke yokudlela usuku yokudlela. Akhiwe ibhizinisi namasiko enkabeni yedolobha, Ngakho-ke, ukukhetha ekahle izivakashi kanye nabantu ibhizinisi.
kanye, isibonelo, ihhotela "Astra" Chelyabinsk Amahhotela (4 izinkanyezi) ethulwa. Itholakala endaweni yedolobha. Le ndawo, ezihlukahlukene intengo nenduduzo kwenza kube ekhangayo amaqembu izivakashi kanye nabantu ibhizinisi. abasebenzi babenobungane futhi basamukela eyokusiza ngenjabulo ngesikhathi ikilasi eliphakeme kakhulu, nge imfudumalo induduzo ihhotela uzokhumbula isikhathi eside.
Ihhotela kuyinto "edolobheni elincane"
Ihhotela kuyinto "edolobheni elincane" itholakala emgwaqweni ethule shady komuzi, e indima Isizalo ahlanzekile, kuhluke amahhotela ambalwa kuphela Chelyabinsk (izithombe zazo okwethulwa kulesi sihloko). Ibanga ukusuka izindawo enkulu yezimboni - kuba plus ezengeziwe kulesi sikhungo. Eduze nje endaweni yomphakathi ephakathi. indawo enhle kakhulu ehhotela ikuvumela ukuba ngokushesha sifinyelele eqophelweni edingekayo kuleli dolobha. Eduze pine ihlathi enkulu. Kulokhu, ukusondela ukuba medgorodku kwenza "edolobheni elincane" yezikhalazo izakhamuzi eziningi kule ndawo abeza lapha ukuze bayothola ukwelashwa.
Uma ucabangela Chelyabinsk amahhotela nge-swimming pool, kufanele kuphawulwe ehhotela "Birch", esemgwaqweni ogwini echibini olunothile, eduze nedolobha. Kusukela amafasitela namakamelo awo uzokubonisa izindawo obumangalisayo yemvelo engafani Urals. Abasebenzi ehhotela "Birches" ngeke wesilisa kusimangaze ngempatho yayo, okuyinto nakanjani kunomthelela aziphumulele nawe. Futhi, uzokubona service lihle, futhi ukuklanywa ingaphakathi. Ihhotela kubhekwa ukuba indawo enhle kakhulu emishadweni, izingqungquthela, izenzakalo zezinkampani, izingqungquthela kanye nokungcebeleka.
Ukuhlola amahhotela spa waseChelyabinsk, udinga ukusho mayelana "Meliot" isikhungo, okuyinto oluthatha isakhiwo 14 storey Itholakala enyakatho-ntshonalanga nedolobha. Eduze kukhona St Catherine iBandla, ice enkundleni "izixaxa", izitolo, izindawo zokudla nezindawo zokudlela ezinhle. Ihhotela likuvumela yokuhlala kumagumbi ukhululekile ezigabeni eziningana - kusukela ejwayelekile ezilula "okunethezeka". Zonke anemisila konke ababekudinga ukuze umsebenzi bazale kokuhlala ezimnandi.
Esitezi futhi engaphansi ithatha Izihambi "Meliot". Lapha wena has a pub, yokudlela ukukhonza cuisine European, ihholo idili nge ithala ongaphandle elikhulu, ibha yokwamukela izivakashi kanye ithala ehlobo. Kubalulekile ukuphawula ukuthi izinkonzo kuzivakashi befika emzini umsebenzi, usebenza ikamelo inkomfa. Kulesi eyinkimbinkimbi futhi Wellness Club, etholakala maphakathi nedolobha.
"ParkCity" kuyihhotela ibhizinisi-class. Akumangalisi, ucabangela emahhotela aphambili e Chelyabinsk, futhi sishilo ke. Yezefundo oluhambisana izindinganiso eziphakeme zaseYurophu, it is eseduze ehlathini edolobheni zikaphayini. Lapha, emoyeni Akumangalisi kuhlanzekile, kuze kube Chelyabinsk city centre, lapho bagxila wonke Impucuko futhi ibhizinisi komuzi, endleleni ngeke kuthathe imizuzu 10 kuphela. Ngenxa imishini ezinhle lobuchwepheshe, indawo enhle kakhulu nengqalasizinda evuthiwe, ihhotela yebhizinisi bemthanda izivakashi.
Yezefundo kungaba indawo ekahle ukuze uphumule futhi umsebenzi izivakashi olindele kunazo, njengoba kuhlongozwa olunzulu amasevisi eliphezulu ezinkampanini ezinkulu ukuze, emihlanganweni ibhizinisi amakamelo ezihlukahlukene inkomfa futhi yokuhlala izivakashi emakamelweni ekhonsathini amadili, okuyinto ngokuvamile lokuvala: izinkundla ibhizinisi ngamunye. Ezizungeze ihhotela kuyinto enkulu yokupaka mahhala, okuyinto ngaphansi kweso elibukhali iwashi vidiyo. Ukuze inkokhelo ehhotela wamukele amakhadi esikweletu American Express, Maestro, MasterCard, Visa.
Ihhotela "Planet" iminyango elalivuliwe yezivakashi e 2005. itholakala endaweni Isizalo ehlanzekile, kude esishintshashintshayo enkulu yezimboni kuhluke, hhayi wonke amahhotela e Chelyabinsk. Eduze kukhona ezokuthutha impambano ezinhle, ngakho-ke, endleleni zonke iphuzu yedolobha kuzothatha esiphezulu isigamu sehora, kanti enkabeni yedolobha - imizuzu 10 kuphela. "Planet" linikeza ngezamabhizinisi isikhungo ibhizinisi kanye ikamelo umhlangano, lapho ungakwazi kalula ukwenza amakhophi amaphepha abalulekile, ukusebenza kwi-computer, oyothatha noma athumele ngefeksi.
Iyatholakala kukhona igumbi lenkomfa yakhelwe abantu 30 (round etafuleni kwezihlalo nesithupha 14 ezengeziwe). Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuqasha uchwepheshe nemishini yekuveta. Iphinde yavula salon ubuhle, yokudlela "Krugosvet", yokupaka nelondolo. Ngesikhathi imisebenzi ehhotela Inthanethi. Ukusungulwa inikeza amasevisi kokubhaliswa izakhamuzi zakwamanye amazwe eza. Isibhakabhaka we hhotela izihambi ezahlukene, induduzo kanye nokuhlanzeka.
Isakhiwo ehhotela "Sunny" itholakala enkabeni yedolobha (endleleni, amahhotela amaningi e Chelyabinsk Ulapha), eduze kwendawo epaki. Isakhiwo ine ehhotela nge amagumbi ezigabeni eziningana intengo, amakamelo for imicimbi ehlukahlukene, "Fortuna" ikhefi, yokupaka. Eminyakeni emihlanu eyedlule, eziyinkimbinkimbi yayigubha iminyaka engu wamashumi amane. Namuhla "Sunny", ngokusekelwe once base Dispensary, liyindawo enkulu ukuze uhlale, ukuzilibazisa, kubanjwa khona imihlangano yezemidlalo, izinkulumo nezingxoxo. Cafe ubeka izivakashi zalo inikeza izitsha nalelo ukunambitheka.
Uma sicabangela mini-amahhotela (Chelyabinsk), leli hhotela ukunikeza "Uralochka", esemgwaqweni endaweni ethule komuzi, eduze esiteshini sesitimela, kanye yomgwaqo "Meridian" (njengoba kungenzeka kalula ukufinyelela noma iyiphi ingxenye idolobha). Indawo yokudlela elula ukuze kuhlaliswe ngezamabhizinisi, bemidlalo namaqembu lokudala, osomabhizinisi, abadlali workshop ezehlukene. Izivakashi anikezwa: wezinwele, a ethokomele cafe-bar, sauna, amabhiliyade, swimming pool, yokupaka. On ngamunye phansi kukhona ekhishini, okuyinto ifakwe isitofu.
Ihhotela "Yuzhnyy Ural"
Ihhotela "Yuzhnyy Ural" - lena hhotela endala emzini. Yakhiwa ngo-1936 yi-abaklami abadumile Italy. Okwamanje samanje ihhotela kuyigugu of Lenin Avenue kanye lesikhumbuzo bokwakha. I elula izindawo indawo esihlukanisa amahhotela eziningi Chelyabinsk, uvumela ukufinyelela okulula iphuzu edingekayo kuleli dolobha. abasebenzi Ukunakekela futhi banobungane, esimweni esikhululekile, induduzo nokuhlanzeka lamakamelo - konke lokhu kwenza ehhotela ezikhangayo izivakashi uhlale.
Ihhotela "Chelyabinsk" itholakala inhliziyo ibhizinisi komuzi. Imizuzu eyishumi kude yiyona esiteshini sesitimela, ezimbili - nje endaweni yomphakathi ephakathi ngesigamu - sezindiza. Uma sicabangela amahhotela Chelyabinsk kusukela umbono wenduduzo, kuyafaneleka ukuthi nakhu - at kokuwa. Amakamelo ukuhlangabezana zonke izimfuno futhi nezidingo nesihambeli olindele kunazo. Ukuhambisana izinga kanye nentengo - iyona ikhadi ukubizwa sikhungo.
Ukuqhubeka ne mini-amahhotela (Chelyabinsk), kumele ishiwo "London" ehhotela. abasebenzi friendly, eliphezulu inkonzo izinga, amakamelo ukhululekile futhi ihlanzekile - konke ngalokhu yokudlela, okuyinto Itholakala enkabeni yedolobha. amakamelo Ukhululekile ngamanani aphansi kukulindile kuleli hhotela. Ihhotela Luhle imindeni kanye ngezamabhizinisi.
Amafulethi anemisila zikagesi ezinhle futhi ifenisha ukhululekile. Izivakashi angakhetha, kukhona izigaba eziningana amakamelo, ngalinye elikwazi intengo lihlukile. Indawo elula ivumela ukufinyelela okulula izingxenye ezidingekayo komuzi. izikhungo Friendly nesimnandi siyokulethela ubuye.
Ihhotela "Royal Dvor"
Ihhotela "Royal Dvor" kubhekwa olungavamile kakhulu Chelyabinsk. Ingaphakathi layo lihlotshiswe ku isitayela yokuqala mlando. Uma efika khona, uyozizwa ukunambitheka kwenkathi. Zonke amakamelo anemisila konke ababekudinga ukuze ukuphumula okuhle. Impumelelo izikhungo yilona eliphezulu inkonzo izinga nabasebenzi enobungane.
Ihhotela "Slavyanka" itholakala maphakathi kwamasiko, ibhizinisi nezezimboni Chelyabinsk. Budebuduze sezindiza futhi esiteshini sesitimela, i-main ezokuthutha impambano eduze ehhotela, bethenga futhi embukisweni izikhungo nge zokubukela amabhayisikobho, ezikhangayo ezinkulu enze kube lula ukuphendula izidingo kokubili ezokungcebeleka kanye ngezamabhizinisi.
Ihhotela has amakamelo 36 kuphela, ngamunye okuyinto ifakwe: yocingo, mini-bar, plasma TV, ephephile siqu, egumbini lokugezela yezivakashi nge ijazana lasebusuku, ikhithi yokuhlanzeka, Slippers. Ngaphezu kwalokho, ihhotela izivakashi uphawu amanzi asemabhodleleni, igumbi inkonzo, internet mahhala, cable TV. Ihhotela futhi izindlu yokudlela omuhle kakhulu igama elifanayo, okuyinto inhlanganisela ephelele service lihle, cuisine emihle futhi, yebo, isimo ethokomele.
Yokudlela ihlalisa abantu 50. He is ekahle amadili noma omshado, izenzakalo zezinkampani, ne imishini yesimanje, ingaphakathi zikanokusho abasebenzi professional uzokwenza umcimbi wakho ukubamba ezingeni eliphezulu kakhulu.
Ihhotela "GorodOtel" itholakala izakhiwo ujantshi esiteshini Chelyabinsk. Ihhotela likuvumela ukhululekile, amakamelo ethokomele nge konke okudingayo ukuze ziphile ntofontofo. Inkonde ngayinye ifakwe umshini ifriji, i-TV, yokugezela yangasese futhi hairdryer. Ngaphezu kwalokho, banikezwe kudingekile ayina izindawo, isevisi itekisi kanye nomshini we-fax. Emhlabeni etafuleni iwashi reception, ungacacisa imininingwane edingekayo ngawe. Iseduze kukhona zonke izinhlobo zokudla, izitolo nezindawo zokudlela. Isikhumulo sezindiza kuyinto 23 amakhilomitha.
"Diamond" ehhotela badalelwa ukuze ukhululekile ukuphila izivakashi. Lapha ungakwazi phumula futhi ithele. Isakhiwo kungokwalabo esigabeni yebhizinisi kanti kuhloswe ngokuyinhloko at abantu ibhizinisi. Itholakala kude okumatasa futhi umsindo, endaweni ezinamahlathi. Kuleli qophelo, izimo ukuphumula nice and umsebenzi elithelayo.
I okwakhe ehhotela ekhaya-isitayela unika izihambi umoya nenduduzo enkulu nakakhulu. Igumbi ngamunye izikhungo ngabanye, kuwumphumela design izixazululo ezithakazelisayo. Ihhotela iminyango ihlale ivulekile kuwe!
Quattro Beach Resort & Spa 5 * (Turkey / Alanya) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Arkhyz - Observatory we-Russian Academy of Sciences
Imbali enkulu kunazo zonke emhlabeni: uzomangala!